Kangton - Nezvedu - Kangton Viwanda, Inc.
Solid / Veneer Musuwo
HDF Yakaumbwa Musuwo
Fiber Girazi Musuwo
Solid / Pivot Musuwo
Moto Rated Suo
Wood SPC Mapuranga
Mari yezvikamu Kangton Industry, Inc. iri yepamusoro chirongwa mhinduro mutengesi weCommerce Floor, Door uye Cabinet.
Kubva 2004, isu tave tichigovana musika wakanaka pasirese, kunyanya muNorth America, Europe, Australia neSouth America.
Commercial Vinyl Flooring, Rigid SPC Flooring, Hardwood Injiniya Flooring, Wood SPC Flooring, Laminate Flooring, Bamboo Flooring, uye WPC Decking
Primer Door, Wooden Door, Moto Rated Musuwo, Solid Yekupinda Door
Kicheni Kabineti, Wadhirobe, uye Vanitory
NaEC, Floorscore, Greengard, Soncap, zvitupa zveFSC uye kuyedzwa neIntertek neSGS.
Zvigadzirwa zvedu zviri zvepamusoro zvemhando yepamusoro, zvinobvumirwa kugamuchirwa nehombe hombe, zvivakwa, musimudziri uye kambani yekutengesa pasi rese.U Unogona kuwana zvinhu zvedu muzvirongwa zvakasiyana muNorth America, Europe, Australia, South East Asia, South America, Mi- East ne Africa.
Kangton sarudza edu ehunyanzvi vadyidzani pamwe epasi rose mhando chiyero. Isu tinonyatso kudzora mhando uye tinopa QC kuongorora panguva yekugadzira uye tisati taisa. Vese vatengi vedu vanogashira QC mushumo nemifananidzo yakadzama yekutakura kwega kwega. Isu tine basa rekukwikwidza mutengo, mhando yepamusoro uye kugadzira chigadzirwa chitsva.
Basa reDDP rinowanikwa, rinosanganisira kutumira, mutero, basa, kumisuo yemikova. Chinangwa chedu ndechekugadzira imwe kukosha kune vatengi vedu uye kukura pamwe chete.
Chero zvaungade pamusuwo, pasi kana kabati, isu tinotenda Kangton ichakupa yakanakisa mhinduro mhinduro.
KuKangton, iwe unowana iro rakakwirira rezvokutengeserana musuwo, pasi uye kabati kuenderana neako imba zvakakwana.
KuKangton, iwe uchachengetedza iyo inogona kuita mutengo uye nguva yezvaunoda.
KuKangton, iwe unowana inovimbika nyanzvi mhinduro uye basa rakanakisa.
Kubva 2004, Kangton Viwanda, Inc. yakapinda yekuvaka munda munda nerutsigiro rwe ISO, CE zvitupa. Nekusimudzira kwakasimba paB2B uye kuratidzira, Kangton anokurumidza kuzivikanwa nevatengi vekunze, vagadziri uye makambani edzimba, kuti ave mumwe wevane simba uye anotungamira mapurojekiti mhinduro vatengesi muChina.
Kangton inopa yakanyanya kuwanda renji, ichipa yakakura yakakura sarudzo dzakasiyana kuti dzienderane nekuravira kwese, kwekugara kana kwekushambadzira, zvemukati kana zvekunze, zvechinyakare kana zvekupedzisira-zvemazuva ano, zvekare kana fashoni, yakapusa kana yakakosha. OEM inogamuchirwa. Kuva neimba yakasarudzika haisi kurota kuKangton.
Yekutanga kirasi yekugadzira mutsara uye zvigadzirwa zvakaunzwa kubva kuGerman neJapan, zvinogadzira Kangton Door, Floor uye Cabinet kuti ive yepamusoro nhanho. Yakaomarara mhando kudzora mutemo kune chero maitiro panguva yekugadzira ita chokwadi chekangton mhando iri pamusoro 3 muChina. Semuenzaniso, huni dzatakatora dzakakamurwa kuva A, B, C, D giredhi nehovhoni yakaomeswa 8-10% yemvura zvirimo. Independent QC timu inpsect zvinhu zvese zvinotumirwa zvisati zvatumirwa. Kangton anonyatso kupa zvinhu zvinozokugutsa zvakanaka.
Kuva vagovani vefekitori kuburikidza nekudyara mari ndiyo nzira Kangton yaanogona kuwana yakaderera kotesheni kubva kufekitori. Kangton kutumira kunze kwemakumi maviri nemazana emakumi emamacompcs madhi pagore, yakawanda kutenga inoita Kangton nemitengo yakanyanya kunaka. Kunze kwezvo, kuitira kubatsira vatengi kuwana pundutso yakawanda uye kuve nemakwikwi emitengo mumisika yavo, Kangton anochengeta yakaderera purofiti margin. Izvi zvinhu zvitatu zvinoita kuti iwe ubhadhare zvakaderera mutengo kuburikidza nekushanda naKangton.
Sarudza Kangton zvinoreva kuti urikusarudza timu yehunyanzvi yekushandira kuti ikushandire iwe. Mainjiniya edu anga ari mune yekushongedza zvinhu munda kweanopfuura makore gumi nemanomwe uye achikwanisa kukupa iwe sarudzo yakatetepa mune dhizaini, dhizaini uye kumisikidza.
Kangton akatengeswa kunyika dzese pasirese kusanganisira USA, Canada, European Union, Australia,
Japan nezvimwewo, izvo zvinopa Kangton yekutengesa timu ine ruzivo rwakazara uye ruzivo kune zvinodiwa musika.
Gamuchira uye sarudza Kangton
pamwe chete tinogona kuvaka ramangwana rakajeka.
© Copyright - 2004-2021: Kodzero dzose dzakachengetedzwa.